အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာများ(၃)
35 Responses to “ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာများ(၃)”
မိုက်တယ်ကွာ..ဒီလိုချွေးမမျိုးရတာ ..ယွန်းတို့ တော့ ဗိုက်ခွေးနမ်းတော့မှာပဲ...
ဟင်းချက်နည်းတွေ ကောင်းလှချည်လားးချက်ရတာ လွယ်ကူပြီး စားကောင်းမဲ့ပုံလေးတွေပဲ..
ဟင်းတွေကလည်း ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စုံနေတာပါလား.. အနံပါတဲ့ အရွက်တွေ လျော့လိုက်ရင် အားလုံး ကြိုက်တယ်.. :)
မကျန်တော့မှာစိုးလို့ အစည်းဝေးက ခနလစ်ပြီး ၀ါးတီးသွားကြောင်းပါ..။
အော်စွန်းသုတ်နဲ့ ငါးကချင်ချက် အမုန်းဆွဲသွားတယ်..။
ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်တော့တော်တော်ကြိုက်တယ် မမ အာလူးသုပ်တစ်ခါမှမစားဖူးသလို ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းပါပဲ ချက်ပြထားတာ တကယ်စားလို့ ရရင်ကောင်းမှာပဲနော် ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးး
မမြသွေးက အကြီးဖြစ်ပြီး အငယ်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မချန်ဘူး
ဒီပိုစ့်လေးက ပထမဆုံး မန့်ထားတာလေးကို သဘောကျမိ၏။
အားလုံး စားချင်လာပြီနော်။ အာလူးသုတ်၊ ကြက်ဥထောင်း၊ ငါးကချင်ချက် ချက်နည်းလေးကို သေချာမှတ်သွားတယ်။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။
ယွန်းကတော့ သားရှိတော့ ချွေးမတော်လို့ရပေမယ့် သမီးရှင် လသာညတော့ ဘယ်လိုပုံနဲ့ အမျိုးတော်ရပါ့နော်။ အင်း.. သိပြီ ယောင်းမ တော်ပါရစေ.. ခွင့်ပြုပါး)))))
sar chin tae.. except Kyaungshar thee.
စာနေကြဟင်းတွေ ကြိုက်တယ်...ဒါပေမဲ့ မလုပ်တတ်ဘူး...စိတ်ညစ်တယ်..
ဘယ်တော့များမှ ပြန်တွေ့ရမလဲ မသိဘူး:(
ကြက်ဥထောင်းဆိုတာတော့ ခုမှကို ကြားဖူးတာ.
မမ ချက်တဲ့ဟင်းတွေ အရမ်းစားကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ အာလူးသုပ်နဲ့ ငါးကလေးအိုးကပ်ကို စားချင်လိုက်တာ။ တစ်နေ့ကျ လာလည်မယ်နော်း)
ို သရေကျတယ် အာလူးသုတ်၊ ကြက်ဥထောင်း၊ ငါးကချင်ချက် ငါးကလေးအိုးကပ် အော်စွန်းသုတ မိုက်တယ်ကွာ..... စားချင်လိုက်တာ။
ဗိုက်ဆာဆာ နဲ့ အတို့အမြှုတ်လေးတွေနဲ့ ထမင်းကို ဝအောင် စားသွားပါတယ် မချောရေ...:) ဖက်ဖယ်ကိုလည်း ကြိုက်တယ်ဗျ.. ပြီးတော့ ငါးကချင်ချက်လည်း ကြိုက်တယ် အဆောင်ဘေးမှာ ၇ှိတဲ့ ဆိုင်ကနေ ဟင်းချိုရည် ကို ကိုယ်တိုင် လုပ်သောက်ရင် အမြဲတမ်း ဖက်ဖယ်လေး နဲ့ ထည့်သောက်တာ အရမ်းသောက်လို့ ကောင်းတယ်ဗျ..
ဂလုဂလုနဲ့ သွားရည်ကျသွားရတယ်း)
မစားဖူးတဲ့ စားစရာတွေမို့ သေသေချာချာဖတ်သွားတယ် ချောရေ...
ရှမ်းနံနံ သိတ်ကြိုက်တယ် ချောရဲ့ ငါးနုသန်း ရေချိုလေးကို ရှမ်းနံနံအုပ်ပြီး စားကြည့်၊ အရမ်းမိုက်၊ ငါးကချင်ချက် စားချင်တယ်၊ ချက်ကျွေးပါ ချောရေ...:P
သွားရေ ကျအောင် လုပ်တယ်
ကြက်ဥထောင်းက မပြုတ်ဘဲ ထောင်းလို့မရဘူးလား
ထမင်းစားပြီးမှ လာဖတ်မိတာ နာတယ်ဗျာ။ အပြောက မစောဘူး ဟွန့်
အိုးးးးး အဲ့ဟင်းတွေ အားလုံးကြိုက်တယ် ။ မလုပ်တတ်တာခက်တယ် ။ လုပ်ရတာလဲ ခက်တယ် ။ အဲ့တော့..ကာ.. တခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်လည်ခေါ်ပါလားချောရယ်း)))
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်က ပိန်းဥကျောက်ဖရုံးသီး ချက်စားတယ်။
တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပန်ထွေဖျော်ရယ် ငါးကချင်ဟင်းရယ်စားဘူးတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ကို ၂ခါရောက်ဘူးတယ်။ အဲဒီတုံးကစားဘူးခဲ့တာ။ အဲဒီ နောက် ပန်ထွေဖျော်ကို လုပ်စားတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကြက်ဥထောင်းနဲ့ ကြောင်လျှာသီး အစိမ်းသုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ လုပ်ကြည့်မယ်။
အ တော် ဘဲ အိမ် က မော် ဒယ် ကို ပြ ပြီး ရ နိုင် တာ လေး နဲ့ ချက် ခိုင်း ရ မယ် အ ရ သာ ရှိ မ ရှိ ရယ် မ ကောင်း တော့ မသိ ဘူး။ ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
လေး စား စွာ ဖြင့် ။
အာလူးသုပ်ရယ်၊ ငါးကချင်ချက်ရယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်ရယ်၊ ငါးကလေး အိုးကပ်ရယ် အရမ်းစားချင်တယ်။ မမဆီလာဖို့ကလည်း အဆင်မပြေဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့.... :(
လာငမ်း.. အဲလေ... :D.. သွားရည်လာကျပါတယ်ခင်ဗျ...
အမရေ လာပြီး . . သားရေကျပါတယ်...
စားချင်စရာတွေက များတယ်၊ စမ်းတော့ စမ်းချက်ကြည့်အုံးမယ်။
နေ့လည် ရုံးမှာ ဖတ်ပြီးထဲက သရေကျနေတာ..ဟင့် အဲဒါတွေတစ်ကယ် စားရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ..
ငါးကလေး အိုးကပ်ကိုစားချင်နေတာ ဘယ်လိုချက်ရမှန်းမသိလို့..အခုတော့သိသွားပီ ...ဒီမှာ ဖက်ဖယ်တော့ရှိတယ် ရှမ်းနံနံ ရှာမတွေ့ဘူး.ရှိတဲ့အရွက်နဲ့ချက်စားကြည့်အုံးမယ်.ကျေးဇူးမမ...အော်စွန်းကို ဆေးဘဲဥ(ဖီတန်)နဲ့ သုပ်စားရင်းလည်း စားကောင်းတယ် မမ
အစိမ်းလိုက်သာ အခွံမခွာပဲ ၀ါးစားပါလို့
မြသွေးနီ တစ်ခေါက်လာလို့ အကြံပေးခဲ့ပါကြောင်း။
ချောရေ.. ဖက်ဖယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြားဖူး၊ မမြင်ဖူးဘူးရော..
ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်နဲ့ ငါးလေးအိုးကပ်ကတော့ ဂျူ့အကြိုက်။း)
I'm hungry now. Treat me.